नेपाली चिकुवै केटीहरुको नंबर (Number of sexy ladies of Nepal)
हामी सबै भालु हन्टरहरुको पहिलो समस्या भनेको खोजेको बेलामा भालु नपाउनु हो। अब १-२ पटक हानेको भालुलाई पनि धेरै मन पर्न छोडेको छ भने नयाँ भालु पनि भने जस्तो पाउन केही न केही त टाईम त लाग्ने नै भो। हुन त यो केटीहरुको खेलमा पसेकाहरुको लागि त यो कुनै खासै ठुलो कुरा भएन तर कहिले काही मात्रै यसो नयाँ माल खोज्नेहरुलाई भने अली धेरैनै मेहेनत गर्नुपर्छ। शहरहरुमा भएका गोप्य गोप्य भालु अड्डहरुको जानकारी पनि सबै भालु हन्टरहरुलाई थाहा नहुन सक्छ। आजकाल काठमन्डौमा पनि यस्तै धेरै भालु अड्डाहरु तथा तिनिहरुका एजेन्टहरु जताततै भेटिन्छन्। तर यो सबै माल अड्डाहरु खाली तिनै रेगुलर भालु हन्तरहरुको मात्रै पहुछमा छन। बिशेष गरेर काठमाडौ बाहिर त्यहाँ बिदेश बसेर आएका नेपालीहरुले भने यो भालु अड्डा कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउन नै धेरै टाईम तथा पैसा लगाउनु पर्ने भएको छ। किनकी काठमााडौ माल अड्डाहरु अली गोप्य नैै छन। जे होस् हामीलाई चहिएको भालु अड्डा हो या भालु हो। अब त भालुहरु पनि नेटबाट आफ्नो ग्राहक खोज्न थालेको कुरा सबैलाई थाहा नै छ होला। अब सजिलो पनि भएको छ किनकी नेटबाट भलुको नम्बर खोज्यो अनी भालुसँग सेट मिलायो अनी हान्यो। बस भालुलाई पनि पैसा मिल्ने हामीलाई पनि मस्ती मिल्ने। आजकालका नयाँ पढे लेखेका केटीहरु दलालहरुबाट ग्राहक खोज्दैनन अनी कुनै भालु अड्डामा पनि बस्दैनन किनकि यिनिहरु दलालहरुलाई आफ्नो चिकाईको कमाई दिन ठिक मान्दैन। अब कुरा आयो कहाँबाट खोज्ने त नेपाली केटीहरुको फोन नम्बर? नेटमा भालु केटीहरुको जती पनि नम्बर पाईन्छ। अनी भालु हन्टरहरुसँग पनि पनि नम्बर हुन्छ। त्यसैले जो जो सँग भालुको नम्बर छ त्यो त्यो त्यो ले १ आपसमा नम्बर साट्यो भने पनि जती पनि पुग्छ। अब साथीहरु लाई मैले म सँग भएक केही भालुहरुको नम्बर दिदै छु। तपाईंहरुसँग पनि छ भने यहाँ कमेन्टमा लेख्नु होला। बिशेेष गरेर शुुद्व भालु पेसामा भएका केटीहरुको नम्बर मात्रै सेयर गर्नु होला। अनावश्य बेकार नम्बर अरुलाई दिएर दु:ख नदिनु होला। लौ त साथीहरु नम्बर हेरेर आवस्यक भए मात्र फोन गर्नु होला। यदी तपाईंहरुसँग पनि कुनै भालुको फोन नम्बर छ भने अथवा आफ्नो नंबर छ भने miracleteenteam@gmail.com मा पठाउनु होला।
​Susmita thapa - 9802902501
Sabi - 9845034247
Rojina Shahi - 9818415387
Puja Paudel - 9809416526
Nilam - 9815798645
Sumita - 9847306164
Prabha - 9855023532
Rai Girl 9802902511
Tika - 9802902517
Kusum - 9804978764
Sapana - 9813606733
kalpana - 9844215755
Muna Shrestha - 9841375123
Payal - 9841519339
Manju - 9803951136
Sunita - 9816145381
Kkumari - 9841127327
Sabina - 9843157096
Sital - 9841313377
Sharmila - 9806660781/9806696713 (Pokhara)
Meena - 9819026420
Divya - 9815252943 divya
Isha - 9841773246
नोट : माथी उल्लेखित नम्बरहरु हामीलाई हाम्रो ट्विटर, इमेल र फेेसबुकद्वारा प्राप्त भएको हो । परिचय नम्बरहरु सबै बास्तबिक हुन या होइनन् त्यसप्रति हामी जिम्मेवार हुने छैनौं । कृपया आफ्न्नो सुरक्षा आफैै गर्नुहोला ।
के तपाईंलाई चिक्न मन लागेर लास्टै खरिएको छ तर चिक्ने जोडि पाउनुभएको छैन ? यदि यसो हो भने आउनुहोस् हामी तपाईंलाई जोडीसँग भेेट गराइदिन्छौँ अथवा बाटो देखाइदिन्छौँ । तपाईंले आफ्न्नो रुचि र चाहना अनुसार छानि छानि चिक्ने केटा/केटी साथी पाउन सक्नुहुन्छ । आफ्नो चिक्ने साथी खोज्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस र आफ्न्नो रुचि अनुसार छान्नुहोस् ।
नेपाली चिकुवै केटीहरुको नंबर (Number of sexy ladies of Nepal) 2016-09-19T23:12:00+05:45 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Bikas Gurung
Nepali Sex Worker Sex Worker Number
Miracle Nepal - Multilingual Sex Story Website: नेपाली चिकुवै केटीहरुको नंबर (Number of sexy ladies of Nepal)